Nei Usinga kwanise Kungoteedzera Amazon.com | Martech Zone
Chikwata cheTuitive chichiri kuyedza kugadzikana mushure megore rino Maodzanyemba NeSouth West Inopindirana (SXSWi) musangano munaKurume. Isu tese takave nenguva yakanaka uye takadzidza zvakawanda nezvenharaunda yekudyidzana uye zviri kuuya zvinotevera. Paive nemazhinji ezvikamu zvinonakidza kubva panhare nechikwata cheGmail kuenda
Kubikira maNerds, mazhinji acho anga achibuda online. Ini ndaida kugovana chimwe chezvandinoda newe.
Kuzivisa Dhizaini Dhizaina kubva kuAmazon naJared Spool
Jaredhi Spool mutungamiri muZviitiko zveVashandisi, kunyanya munzvimbo yekutsvagisa yakawanda. Ave achishanda na Amazon.com Kwemakore mazhinji, kuongorora kwavo traffic maratidziro uye kuyedza kuvandudza ruzivo rwevashandisi vevatengi veAmazon Hurukuro yake yaive nemapoinzi makuru maviri.
Akanongedzera zvinhu zvinonakidza zvinoitwa neAmazon nezvinhu zvitsva uye nekugara achishandisa shanduko diki kuti uvandudze ruzivo rwemushandisi.
Akakurukura zvakare kuti iwe haugone kuita zvakafanana zvinhu seAmazon uye kutarisira kubudirira.
Nei isu tese tisingakwanise kungoteedzera Amazon? Mune rimwe shoko "traffic."
Amazon yave nevashanyi 71,431,000 kubva Zvita wegore ra2008. Vakashandira vatengi zviuru makumi manomwe nezvinomwe kubva zvavakatanga. Iko kune makumi maviri nemaviri maodha akaiswa sekondi yega yega. Iwe webhusaiti yako ine iwo mhando dzenhamba dzemigwagwa?
Wakanakisa muenzaniso Jared anoshandisa ndeye mushandisi yakagadzirwa ongororo. Vazhinji vanhu vanoona wongororo kunge unobatsira kwazvo kana uchitenga online, uye wongororo yemushandisi paAmazon inoonekwa zvakanyanya. Saka nei usingakwanise kungo wedzera ongororo yemushandisi pane yako saiti? Jared akataura kutsvagurudza kunoratidza kuve nekudzokorora kusingasvike makumi maviri pamusoro pechigadzirwa hakunyatso kubatsira vanhu kusarudza kana chigadzirwa chiri icho chavanoda. Mune zvimwe zviitiko zvinonyatso deredza maonero akanaka echinhu.
Anoenderera mberi nekugovana izvo chete pamusoro pevatengi 1 vatengi vanonyora ongororo. Funga nezve mangani online ongororo iwe aunonyora maringe nekuwanda kwawakaverenga. Saka kuti uwane iwo makumi maviri emaongororo kuti ubatsire kutengeswa kwechinhu iwe unozofanirwa kuve ne1,300 Million vanhu vatenge chinhu. Whoa.
Ndinokukurudzira kuti utarise Jaredhi mharidzo (ona pazasi). Akangwara kwazvo uye nyore kuteerera.
Ini zvakare ndinokukurudzira iwe kuti uve nechokwadi chekuti iwe unogara uchivandudza zvigadzirwa zvako zvepamhepo nenzira dzinonzwisisa zvakanyanya kune yako saiti. Saiti yega yega yakasiyana, ine vashandisi vakasiyana uye avo vashandisi vane zvakasiyana zvavanoda. Iko hakuna mashiripiti bullet ficha yekubudirira online. Nzira chete yekuona kuti budiriro yako kuteerera vateereri vako, uye kuramba uchivandudza maturusi avanoda kuti vapedze mabasa avo.
Iyo Nyowani Media Manifesto